Uphengululo lweMveliso zikaSemalt kunye nendlela abanokuBeka ngayo kwi-10 ephezulu yokuKhangela kukaGoogle
Iphepha lokuqala le-google ilawula i- 92% yezithuthi. Oku kuthetha ntoni kwishishini lakho? Kuthetha ukuba i-SEO ibaluleke ngakumbi kunangaphambili.
Xa uqhuba ishishini, ukukhangela izinto ezifana nokuxinana kwamagama aphambili, ukubuyela umva, kunye negunya lokukhangela kunokuthatha ixesha elininzi. Xa uzama ukujonganisa le nto ngokujongana neemfuno zomthengi wakho, iba yinto engenakwenzeka. Oku kugxininiswa kutheni ufuna umsebenzi ozinikezelwe kwiqela leengcali kwi-SEO.
I-Semalt yinkampani ebeke ukubaluleka kwe-SEO ngaphambili. Babonelela ngenkxaso kwiinkampani ezingenayo iingcali ze-SEO ezindlini.
Basebenza kunye nalabo abangaqhelekanga kwi-SEO ngolingo lweentsuku ezili-14 senkonzo yabo. Banayo nemveliso elungiselelwe abo bangafuni ukungena kwicala lobugcisa: I-AutoSEO.
Ukuseka ibali labo leMpumelelo
I-Semalt yinkampani ezithandelayo kwirekhodi eqinisekisiweyo. Banamatyala amaninzi empumelelo, amanye kuwo abona ukwanda okukhulu. Kwimeko yoqhaqho iTR, banegalelo ekwandeni kwamaxesha ali- 14. Ungazibona iinkcukacha zendlela yabo engezantsi.
I-AutoSEO ibeka inkampani yabo kwii-100 eziphambili ze-179 amagama aphambili kwiinyanga ezine. Eyona nto ibasondeze kwi-10 ephezulu yephakeji ye-FullSEO. Le phakheji ibavumele ukuba batshaye ngaphandle kwe-92% yezithuthi zabantu abafuna le nkonzo. Siza kuthetha ngophononongo olubanzi ngakumbi lwale miba kamva, kodwa imeko elula yile: Semalt iyasebenza.
I-Semalt Ngaba yiarhente egcweleyo eqesha abantu eyahlukeneyo eyakhelwe ukuphatha nayiphi na inkampani efuna isikhundla kwi-SEO. Yintlangano yehlabathi, ke ngoko unokuthetha ulwimi oluqhelekileyo kunye nabo.
Unokunxibelelana nabo kwi-Skype, WhatsApp, telegraph.me, i-imeyile, okanye umnxeba. Onke unokulibona iqela lakhe kwiphepha labasebenzi. Unokuthatha umzuzwana ukuba ubenomdla kwi-turtle yabo.
Ukuba ufunda oku, unomdla kwi-SEO. Ungangumntu ozimeleyo, umnini shishini elincinci, okanye umthengisi olikunye naye.
Ngayiphi na imeko, awuyi kufika kude ngaphandle kokuqonda ezinye ze-jargon kumzi mveliso.
I-SEO, okanye iNjini yokuKhangela, iyakha iwebhusayithi yakho ngendlela yokuba xa abantu bekhangela ikota ethile, bakufumane. La magama, okanye amagama aphambili, andisa inani lokugcwala kwiwebhusayithi yakho. Umzekelo, ukuba ufuna ukuba ngugqirha wezamayeza owaziwa ngokuba yirinoplasty, amagama akho abalulekileyo anokubandakanya "utyando lwe-rhinoplasty" okanye "rhinoplasty."
I-algorithm kaGoogle yakha ngendlela apho idibanisa khona abantu kwiwebhusayithi efanelekileyo, enegunya. Jonga lo mzekelo ungasentla, osebenzisa igama elingundoqo "rhinoplasty." Zinegunya kuba zivela kwimithombo enokuthenjwa. Ikwenza oku ngokuthumela abakhweli, okanye i-bots eyakhelwe ukuskena iwebhusayithi. Izikrelemnqa zimisela umgangatho ngokusekwe kwizinto ezahlukeneyo.
Amagama aphambili aphathekayo ngamagama acinga ukuba afanelekileyo ukuchaza umxholo wakho.
I-backlink linani leekhonkco zomxholo wakho ezibonakala kwezinye iiwebhusayithi, ngakumbi xa ezo webhusayithi zithathwa njengegunya.
Ukwakha ikhonkco yinkqubo yokuseka ii-backlinks.
Ii-Metric zentlalo ezinje ngezahlulo kunye nee-tweets kwakhona
Zininzi izinto ezininzi ezingena kule nto ye-SEO, kwaye asiyi kungena kuzo zonke apha, kodwa ezi zinto ziya kubaluleka kuwe ukuba uyazi ukuqonda into engena kwiimpawu zika-Semalt. Ibhlog yethu inesikhokelo esibanzi ngakumbi kwi-SEO ukuba unqwenela ukuntywila ngokunzulu kwisifundo.
Iimveliso zikaSemalt ziyonyusa njani i-SEO yakho
Ngoku ngoku sinombono ongcono wento esiyibhangayo, sinokungena kwiimveliso zikaSemalt ngokucacileyo. Sijolisa kwiindawo ezifumaneka phantsi kwethebhu yemveliso yazo ukuze izinto ziqale. Oku kubandakanya:
Iwebhusayithi ichaza ukuba i-AutoSEO yeyabo bafuna ukwandisa ukuvela kwewebhusayithi yabo, kodwa ngaphandle kokutyala imali eninzi. I-AutoSEO yimveliso esisiseko yabo bafuna ukungena kwi-SEO. Ngabantu abayi-14 lamawaka kumazwe angaphezu kwe-192 eyinxalenye yenyuselo, ifumene ukuthandwa kakhulu.
Isizathu esikhulu soku kuthandwayo sisilingo seentsuku ezili-14 .99 iisenti abazinikayo. Ngokufumana i-AutoSEO, ingcali yabelwe kwiakhawunti yakho ukuba ihlaziye indawo yakho. Iingcali ze-SEO ziya kufumana amagama aphambili aqhele ukusetyenziswa kushishino lwakho, kodwa akwanele ukukunikeza iindwendwe ezijonge ukuthenga.
I-Semalt ibonelela ngeengxelo zesikhundla ngenkqubo yazo yohlalutyo. Ungayibona indlela eyenziwa ngayo yinkampani yakho ngokukhangela kwideshibhodi, eyona nto iphambili xa ungena.
Emva kohlalutyo lwamagama aphambili kushishino lwakho, injongo yokugqibela iya kuba kukwakha amakhonkco kwiwebhusayithi yakho ukuqinisekisa ukuba ubekwa ngamagama aphambili.
Baze basebenzise ii-anchor amakhonkco, eziya kuthi zithathe abasebenzisi ukuya kwindawo ethile kwiphepha elifanelekileyo kubo. I-AutoSEO idibanisa ezi linki ze-anchor kunye ne-non-anch to use your brand names names njengemithombo egunyazisiweyo ecaleni kwala magama aphambili.
Amaxabiso kule nkqubo aya kwahluka phakathi kwe- $ 99 ngenyanga ukuya phantse kwi- $ 900 ngonyaka. Unokukhetha ubude bephulo lakho lokuba yinyanga enye, iinyanga ezintathu, iinyanga ezintandathu, okanye unyaka omnye. Ngokuthelekisa, ezinye iiwebhusayithi ezininzi ze-SEO zinamaxabiso asisiseko kwi-dollar eyi-1000 ngamaphulo abo. Iiphakheji zazo zithambekele ekubeni zikhethe ezimbalwa.
I-FullSEO luhlobo oluphambili lwe-AutoSEO. Umahluko obonakalayo phakathi kwale kunye ne-AutoSEO kukuba umphathi weSemalt abelwe ityala lakho. Umphathi usebenza nochwephesha we-SEO ekuqaleni, emva koko ke ukuthumela ingxelo rhoqo malunga nenkqubela phambili yephulo lakho.
I-FullSEO yotyalo-mali kwikamva leshishini lakho. I-ROI, okanye ukubuya kutyalo-mali, ijikeleze malunga ne-700% ngokusekwe kumava abathengi bangaphambili. Ngazo zonke iidola ezili-100 ozichitha usenza oku, ufumana imbuyekezo engama-700.
Umzekelo, iarhente ethengisa izindlu nomhlaba eMexico yayiphantse yangama-700% yokunyuka kwezithuthi, nto leyo eyenze ukuba bahambe benani elinye kwindawo yamagama aphambili. Ngokubekwa kwindawo ephezulu yamagama angama-724, ivumela ukuba ijolise kwabo bafuna iipropathi eMexico ngokukhululekileyo. Ngaphandle kwe-FullSEO, ngekhe balibone eli nqanaba lokugcwala.
Xa ufuna uthelekiso olulungileyo lwenza ezinye iinkampani, sinokujonga kwiWebFX. I-WebFX inikezela uluhlu olunomdla lweempawu ze-SEO kunye nezixhobo zokuhlalutya. Nangona kunjalo, uSemalt unokungafani ngakumbi kukhetho lwabo lwamaxabiso.
Kumashishini amancinci aneebhajethi ezincinci, oku kufikeleleka ngakumbi. Ngaphantsi kwe-FullSEO inketho, uSemalt uyavuya ukufumana ikowuti yexabiso kwiphakheji yabo ye-SEO yendawo. Semalt ifuna ukusebenza nohlahlo-lwabiwo mali lwakho. Ukuhlolwa ngokukhawuleza kwewebhusayithi yabo kutyhila ubuncinci beendleko ezingama- $ 475 ngenyanga.
Ungazama ngokufanelekileyo ulingo lweentsuku ezili-14 kunye ne-AutoSEO ukuzilungiselela ngokwakho le nto. Nangona kunjalo, kuya kufuneka ukuba usebenzise iwebhusayithi eyahlukileyo, njengoko uSemalt eya kukuxelela ukuba yeyiphi iphakheji eya kusebenza ngokufanelekileyo kwindawo nganye. Ukubeka nje, abanye abathengisi abanikezeli ngokwahluka okufanayo kwiimveliso uSemalt anazo.
Yintoni i-SEO ye-E-Commerce?
I-Semalt ibonelela ngemveliso ekhethekileyo kwabo bane-E-Commerce, okanye Ivenkile ye-Intanethi, kwiimfuno. Le phakheji ifana nezo sele zikhankanyiwe kwaye ingaphezulu kolwandiso lwe-AutoSEO kunye nemveliso ye-FullSEO.
I-Semalt ekujoliswe kuyo ngamagama aphakamileyo asezantsi asuselwa kwiimveliso nakwiimpawu. Amagama aphambili ekufuneka ubeke umgangatho, okanye amagama abalulekileyo anokuwacebisa, kugxilwe kubantu abafuna imveliso ethile.
Umzekelo, ukuba ufuna ukwenza inqanaba ngegama elithile eliphambili, "iiwotshi zamadoda ezingabizi kakhulu ezibonakala zibiza kakhulu," uya kufumanisa ukuba uluhlu oluphezulu ngoku lubandakanya iposti yoluhlu okanye ividiyo.
Nge-E-Commerce, unokufumana iwotshi yakho kolu luhlu okanye kwiividiyo ezilishumi eziphezulu. Ngamagama athile abekwe kakuhle kunye ne-SEO yokunyusa, uya kuzisa ishishini lakho kwinqanaba elifanayo lokugunyazwa leli gama eliphambili.
Uhlalutyo ligama elisetyenziswa ziinkampani ezininzi. UGoogle unaso sonke isixhobo esakhelwe ukulandelela indlela iintengiso zakho ezihlawulelwayo ezenza ngayo igama elithi Google Analytics. Le mveliso ingakumbi yecandelo le-AutoSEO kunye ne-FullSEO, kwaye ideshibhodi iza nazo zombini iimveliso.
Isixhobo sohlalutyo lukaSemalt sinika ukuzithemba kumthengi ngendlela apho inokufundwa ngokulula. Ikwabonelela uSemalt kunye nomthombo wokuphendula, ukunika ubungqina bemikhankaso yakho evuthiweyo isebenza. Apha ngezantsi kukho ezinye izibalo zabantu abasebenzisa inqaku lohlalutyo.
Uhlalutyo olunzulu lubonelela ngesakhono sokubeka iliso kukhuphiswano lwakho, kuchonga iimarike ezintsha, kwaye wafumana amagama aphambili afunekayo ukwenza imali kolo lwazi. Kwakhona, i-Semalt ikuvumela ukuba ukhangele izikhundla zakho naliphi na ixesha losuku.
Xa ubona iwebhusayithi ihamba kwi-HTTP iye kwi-HTTPS, lo ngumzekelo wesitifiketi se- SSL esisebenzayo. Eli nqaku lonqabiseko lifihla idatha yakho kangangokuba yenza kube nzima kubakhandi ukuba bafumane ukufikelela ekuchongeni ulwazi, njengedatha yamakhadi etyala.
Kuyimfuneko ukuba ngaba iwebhusayithi ye-E-Commerce okanye iwebhusayithi esekwe kwinkonzo egcina nayiphi na idatha yabathengi abanobuthathaka. Kwakhona, ukuba iGoogle ichonga indawo yakho njengendawo ekhuselekileyo, iya kuba nethuba elingcono lokufikelela kwizikhundla eziphezulu.
Isishwankathelo sendlela uSemalt anokunceda ngayo kwinqanaba leShumi
Ngerekhodi eqinisekisiweyo, amakhulu abathengi abonelisekileyo, kunye neqela leengcali, I-Semalt liqela elinamaxabiso abantu abazimisele ukusebenza nawe ukuqinisekisa ukuba unokuhlangabezana neenjongo zakho
Sibonile indlela i-AutoSEO, i-FullSEO, i-E-CommerceSEO, i-Analytics, kunye ne-SSL zonke ezinezibonelelo zazo zokuqhuba i-traffic kwiwebhusayithi yakho. Ngeqela labo leengcali nabaphathi, uya kufumana amagama abalulekileyo, kunye ne-backlinks efunekayo yokuzisa iwebhusayithi yakho phezulu kuGoogle.